မြန်မာရေးရာ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မြန်မာရေးရာ. Show all posts
ကာချုပ်နှင့် အကြီးတန်း စစ်အရာရှိ များကို အီးယူသို့ ဖိတ်ကြားမှု ပိတ်ပင်
မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း ရခိုင် အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်တပ်က လုံခြုံရေး တပ်အင်အား အလွန် အကျွံ သုံးစွဲခဲ့တယ် ဆိုပြီး စစ်တပ် အကြီးတန်း အရာရှိ တွေကို ဥရောပ နိုင်ငံတွေဆီ ဖိတ်ခေါ်တာတွေ ဥရောပ သမဂ္ဂ (အီးယူ) က ဆိုင်းငံ့ ပိတ်ပင် လိုက်ပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ တပ်မတော် အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေကို ဖိတ်ကြားမှု ဆိုင်းငံ့ ထားမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့ လူဇင်ဘာ့ဂ်မြို့မှာ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အီးယူကောင်စီက ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
ကလေးသူငယ်တွေကို ရက်ရက်စက်စက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အထောက်အထားတွေ ရရှိထားပြီး သေသေချာချာ စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်ကာ ကျူးလွန်သူတွေကို ဥပဒေအရ အရေးယူရမယ်လို့ အီးယူဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အပါအဝင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုမှာ ပါဝင်စေလိုပြီး ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ ရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေကာ ဒုက္ခသည်တွေကို မူလနေရင်းဒေသတွေဆီ ပြန်လာနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်စေလိုကြောင်းလည်း အစည်းအဝေးမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြတာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေဟာ တိုးတက်လာခြင်းမရှိဘူး ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်စီမံချက်တွေကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီး တိုးတက်လာတယ်ဆိုရင်လည်း အီးယူအနေနဲ့ တုံ့ပြန်ဖို့ အသင့်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ အလွန်စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်နေပြီး အိမ်တွေကို မီးရှို့တာတွေ၊ ပြင်းထန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းထောင်တာတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဘက်ကို ရိုဟင်ဂျာ ၅ သိန်းနီးပါး ထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ အချက် ၈ ချက်ပါ အီးယူရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လူဒီလောက်များများ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ထွက်ပြေးကြရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ လူနည်းစုတွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထားလုပ်ဆောင်တဲ့ သင်္ကေတဖြစ်နေပြီး ဒုက္ခသည်တွေ နေရင်းဒေသတွေဆီ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ဖို့ဟာလည်း အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စာနာမှုအကူအညီပေးရေးနဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေ သွားရောက်သတင်းရယူခွင့်တွေကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို သိရှိနိုင်ဖို့နဲ့ အကူအညီပေးနိုင်ရေးတွေမှာ အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရေးအတွက်နဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ အီးယူအနေနဲ့ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့လည်း ကြေညာချက်ထဲမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အီးယူကောင်စီအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နေပြီး ခွင့်ပြုမယ်ဆိုပါက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လှုပ်ရှားမှုတွေကို တိုးချဲ့ကူညီပေးနိုင်ဖို့နဲ့ အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေအတွက်လည်း အသင့်ရှိနေတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/234008
ကဏ္ဍ နိုင်ငံတကာသတင်း, မြန်မာရေးရာ
စိန်ခေါ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရလို့ ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပေးသင့်
ဒီမိုကရေစီ နုနယ်သေး ပေမယ့် စိန်ခေါ်ချက် ပြဿနာ မျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင် မယ့် အခွင့် အလမ်းပေးဖို့ အမျိုးသား လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အကြံပေး ဦးသောင်းထွန်း က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Mr. H.R. McMaster နဲ့ တယ်လီဖုန်းကတဆင့် ပြောဆို ခဲ့ရာမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒါ့ပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း ၀ါရှင်တန် ဒီစီမှာ အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုလည်း အလားတူ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု အသစ်တွေ ချမှတ်မလားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ အထူးတလည် မဆွေးနွေးခဲ့ကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် လက်နက်အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ စစ်ရေးသင်တန်းပေးတာတွေ ဆိုင်းငံ့ကြဖို့ အမေရိကန်အစိုးရက နိုင်ငံတကာကို ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတ အိုဘားမား လက်ထက်က ဆိုင်းငံထားခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေးယူ မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ဘက်က ထပ်မံပြောဆိုတာတွေမရှိသေးဘူးလို့ ရိုက်တာသတင်းက ဖေါ်ပြ ပါတယ်။
ဒီအတွင်း ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင် ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတချို့ဒေသတွေမှာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေး တင်းမာ မှုတွေ မြင့်တက်လာနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပူပင်မိကြောင်း၊ သက်ဆိုင်သူအားလုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ရဲ့ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ပူတင်က ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Wednesday, October 04, 2017 No comments:
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်ကနေ ထွက်ပြေး သွားတယ် ဆိုသူတွေ ထဲမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ရောက်သွားတဲ့သူ တွေကိုပဲ ပြန်ခေါ်ဖို့ စဉ်းစား မယ်လို့ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် ဘက်က ပြောဆိုတဲ့ အကြောင်း နှစ်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် တွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရာရှိ တစ်ဦးက AFP သတင်း ဌာနကို ပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကတော့ သူ့ဆီမှာရောက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် ၉ သိန်းလောက်ရှိနေပြီး အဲဒီလူတွေအားလုံး ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ၉ သိန်းထဲမှာ ၅ သိန်းက လတ်တလောဖြစ်ရပ်ကြောင့် ရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီး၊ မနှစ်က ရောက်လာသူက ၁ သိန်း၊ ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းရောက်နေသူ က ၃ သိန်း လောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစောပိုင်းရောက်နေသူတွေ ပြန်ခေါ်ဖို့အတွက် သူတို့မှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ အခုဆွေးနွေးပွဲတက်လာတဲ့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောဆိုတယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
၁၇ ကြိမ်မြောက် တရုတ်- မြန်မာ ပေါက်ဖော်ပွဲ ကျင်းပ
၁၇ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-မြန်မာ ပေါက်ဖော် ပွဲတော်ကို တရုတ်နိုင်ငံ အနောက် တောင်ပိုင်း ယူနန် ပြည်နယ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ရှိ ရွှေလီ မြို့မှာ မနေ့ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့က ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ ပွဲတော်မှာ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ အပြင် အရှေ့တောင် အာရှ အာဆီယံနိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါ ဖော်ပြခဲ့ ကြပါတယ်။
ယူနန် ပြည်နယ်မှာ တရုတ်- မြန်မာ ပေါက်ဖော် ပွဲတော်ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်က စတင်ကျင်းပလာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ကိုယ်စားပြုအလှမယ်တွေ ပါဝင်သရုပ်ဖော်ပြသတဲ့ ပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
From : Myanmar Cable News by May Thinzar
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/50956/
ARSA အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ကို မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘုံရန်သူအဖြစ် သတ်မှတ်
Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ကို မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူ အဖြစ် ခံယူ တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အဗ္ဗဒူ ဟက်ဆန် မာမွတ် အလီက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို သွားရောက်တဲ့ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်ကနေ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်နေ့အထိ ခရီးစဉ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေကို စိစစ်ဖို့နဲ့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ဖို့ ကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်သွားရေး အသင့်ရှိကြောင်း၊ ဒုက္ခသည် မိသားစုတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ပြန်ပို့ရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေ တင်ပြဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/50937/
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ဆွေးနွေး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ဒါကာ မြို့တော်မှာ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မာမွတ် အလီနဲ့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နယ်မြေထဲ ရောက်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ပြန်ခေါ်ရေး ကိစ္စကို ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်တော့ စတင်မယ် ဘယ်နှစ်ယောက် ပြန်ခေါ်ဆိုတာတွေကို အသေးစိတ် ထုတ်ဖေါ်ကြေညာတာ မရှိပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြပြီး မွတ်ဆလင်တွေ ပြန်ပို့ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ် ညှိနှိုင်းနိုင်အောင် ပူးတွဲကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း သွားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ပူးတွဲကော်မတီက ရခိုင်ပြည်က လာရောက်သူတွေ ဟုတ် - မဟုတ်ဆိုတာ စိစစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းတွေ ပါဝင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးနေရတဲ့ မွတ်ဆလင်ဦးရေ လေးသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြကြပေမယ့် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့ အဲဒီကိန်းဂဏန်းကို လက်မခံဘူးလို့ သိရ ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, October 03, 2017 No comments:
ဘတ် တစ်သိန်းတန် ရွှေနဲ့ ငွေသားတွေကို ပြန်ပေးတဲ့ မြန်မာလုပ်သားကို ဆုချီးမြှင့်
အောက်တိုဘာ ၁ - ထိုင်း ကျောင်းဆရာ တစ်ဥိး ပျောက်ဆုံး ခဲ့တဲ့ ဘတ်တစ်သိန်း တန်ဖိုးရှိ ရွှေနဲ့ ငွေသားတွေ ပါဝင်တဲ့ အိတ်တစ်လုံး ကို ပြန်ပေးတဲ့ မြန်မာ လုပ်သား တစ်ဦးကို အဆိုပါ ကျောင်းဆရာက ဘတ် ၂၀ဝ၀ ဆု ချီးမြှင့် ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ် မြန်မာအမျိုးသား ကိုနိုင်ဟာ သူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မိုးရေရွှဲနေ တဲ့ ခါးလွယ်အိတ်တစ်လုံးကို ဒွန်ဆက် ခရိုင် ရဲစခန်းကို လာရောက် အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
ဒွန်ဆက်မှာရှိတဲ့ ဖိုလိုဟာကန် ဆိုင်မှာ အလုပ် လုပ်သူဟာ ဘတ် ၆၁၉၀ နဲ့ အလေးချိန် ငါးဘတ်ရှိတဲ့ ရွှေလက် ကောက်တစ်ကွင်းကို အိတ်ထဲမှာ တွေ့တဲ့ အတွက် ရဲစခန်းကို လာရောက်အပ်နှံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည်နောက် ဒွန်ဆက်မှာ နေတဲ့ ကျောင်းဆရာ ဂျီရာဆက်သုဝ∞ချိုတီဟာ အဆိုပါ ရဲစခန်းမှာပဲ သူ့အိတ်ပျောက်ဆုံး ကြောင်း လာရောက် တိုင်ချက် ဖွင့်ပါတယ်။ အဲသည်အခါ သူ့အိတ်ကို ပြန်တွေ့ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဆရာက သည်ရွှေ့ ပြောင်းလုပ်သားအပေါ် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ အ နေနဲ့ ဘတ် ၂၀ဝ၀ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ဂျီရာဆက်က သူဟာ မိုးရွာနေချိန် ကားဆီကိုပြေးသွားရာမှာ ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ အိတ်က လျှောပြီး ပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ပစ္စည်းတွေကို ပြန်ပေးတဲ့မြန်မာလုပ်သားကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း မစ္စ တာ ဂျီရာဆက်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
စုပြည့်စုံ [ref: Bangkokpost, Oct 1, 2017.]
Originally published at - http://www.kumudranews.com/news/international-news
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, October 02, 2017 No comments:
ကိုင်ရို မြန်မာသံရုံး အနီး အသေးစား ပေါက်ကွဲမှု ၎င်းတို့လက်ချက်ဟု အီဂျစ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ ကြေညာ
အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရို မြို့တော်ရှိ မြန်မာ သံရုံး အနီးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသေးစား ပေါက်ကွဲမှုဟာ သူတို့ လက်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ အီဂျစ် စစ်သွေးကြွ Hasm အဖွဲ့က ကြေညာ ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မွတ်စလင်ကလေးငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို သတ်ဖြတ်နေသူတွေကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်တာဖြစ်သလို အားနည်းတဲ့ မွတ်လင်တွေနဲ့အတူ သွေးစည်းညီညွတ်ရပ်တည်ကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်တာလို့ အီဂျစ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့ ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါ။
ဒီပေါက်ကွဲမှုဟာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမဟုတ်ဘဲ သံရုံးမြောက်ဘက် ကိုက် ၅၀၀ ခန့်အကွာ နှစ်အိမ်ကျော်လောက်မှာ ဂတ်စ်ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ မရှိဘူးလို့ ကိုင်ရိုမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံး ဒုတိယအတွင်းဝန် ဦးဇော်မျိုးထက်က ဒီဗွီဘီကိုပြောပါတယ်။
“ဂတ်စ်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလူအသေအပျောက်မရှိပါဘူး။ ရဲကထုတ်ပြန်ထားတာ တော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ သံရုံးမှာ ပေါက်တာမဟုတ်တဲ့ အတွက် အပျက်အစီးဘာမှမရှိပါဘူး။ အသံအကျယ်ကြီးကြားရတာ တခုပဲရှိပါတယ်။ သံရုံး မြောက်ဘက် ကိုက် ၅၀၀ လောက်ဝေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ လှမ်းပါတယ်။ လမ်းလျောက်သွားမယ် ဆိုရင် ၂မိနစ် ၃ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရမယ့်နေရာပါ။”
ဒီပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အီဂျစ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကနောက်တနေ့မှာမှ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးဇော်မျိုးထက်ကပြောပါတယ်။
“မြန်မာသံရုံးရဲ့ ပရ၀ုဏ်အတွင်းမှာတော့ ဘာပေါက်ကွဲမှုမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျ။ စနေနေ့ ညနေဘက် ဒေသစံတော်ချိန် ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ် လောက်မှာ ကျနော်တို့ သံရုံးနဲ့ ကိုက် ၅၀၀ အကွာလောက်မှာရှိတဲ့ လမ်းဆုံတိုက်ခန်းတခန်းမှာ ဂတ်စ်ေပါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အဲဒီညမှာဘဲ ရဲဘက်ကနေ သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဟာဂတ်စ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီးတော့၊ အဲဒါကို နောက်တနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကမှ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတခုက သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုပြီးတော့မှ ကြေညာချက်ထုတ်ထားတာရှိပါတယ်။”
လက်ရှိအချိန်မှာ သံရုံးလုပ်ငန်းတွေ ပုံမှန်လည်ပတ်နေပြီး လုံခြုံရေးအတွက် အီဂျစ်ရဲဌာနနဲ့ အီဂျစ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနတို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ မြန်မာသံရုံးတာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။
ဒီပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အီဂျစ် ပြည်ထဲရေးကတော့ မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခြင်းမရှိ သေးပါဘူး။
Hasm စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ကိုင်ရိုမြို့တော်တ၀ိုက်မှာ တရားသူကြီးတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င်တွေကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှု အတော်များများလုပ်ခဲ့မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/231608
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဖုန်းဆက် စကားပြော
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး- နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ် စကားပြော ခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အကြမ်းဖက် မှုတွေ ရပ်တန့်အောင် မြန်မာ အစိုးရက ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း ပြောကြား ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လက်ခံဖို့၊ အကြမ်းဖက်မှု ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းတွေကို အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်က ကူညီပံ့ပိုးဖို့၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူ Heather Nauert က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အင်အားသုံး အကြမ်းဖက်တာတွေ ရပ်တန့်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, September 21, 2017 No comments:
မြန်မာ အစိုးရက အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ အစည်း အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ARSA ကို အန္တရာယ် ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် Facebook လူမှုရေး စာမျက်နှာက ပိတ်ပင် လိုက်ကြောင်း Facebook ကုမ္ပဏီ ပြောခွင့် ရသူက ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာကို အတည်ပြု ပြောကြား လိုက် ပါတယ်။
အကြံပေးကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုက်တွန်း
မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ ရခိုင် အကြံပေး ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက် တွေကို အမြန်ဆုံး အကောင် အထည်ဖော်ဖို့ ထိုင်း အခြေစိုက် Fortify Rights လူ့အခွင့် အရေး အဖွဲ့က တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လက် ရှိဖြစ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ့်အစား၊ ဒီကိစ္စတွေအတွက် ရခိုင်အကြံပေးကော် မရှင်ကို အကာအကွယ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ Fortify Rights အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးအကဲ Matthew Smith က ပြောပါတယ်။
ကော်မရှင်က အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်တန့်သွားဖို့ အကြံပြုချက်တွေ အခိုင်အမာ တင်ပြလာပြီမို့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီအကြံပြုချက်တွေအတိုင်း အချိန် မဆိုင်းဘဲ ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အကြောင်း၊ ပကတိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ ကို အမြန်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ လိုကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ထား တာတွေဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြား ဆက်ဆံသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်၊ ရေရှည်မှာ လူမှုအဝန်းအဝိုင်းတွေအကြား လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့လာပြီး အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်လာအောင် မီးမွေးပေးသလို ဖြစ်စေတယ်လို့ Matthew Smith က ပြောပါတယ်။
အခုအချိန်ဟာ မြန်မာအစိုးရအတွက် ရခိုင်အကြံပေးကော်မရှင်၊ ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေး ကော်မရှင်တို့နဲ့အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကို ဖြေရှင်းဖို့ အခွင့်အလမ်းဖြစ်ကြောင်းလည်း Fortify Rights အဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အလားတူပဲ HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှရေးရာ လက်ထောက်တာဝန်ခံ Phil Robertson ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်မှာ တာဝန်ယူဖို့ မစ္စတာ ကိုဖီအာနန်ကို ကမ်းလှမ်း ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လက်ခံနိုင်မလား ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, August 25, 2017 No comments:
ဆီးဂိမ်း မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့လုံခြုံရေး မလေးရှား တာဝန်ရှိတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းမည်
မလေးရှား နိုင်ငံမှာ အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပတဲ့ (၂၉) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲမှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် နေတဲ့ အားကစား သမားတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ လာရောက် အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး မလေးရှား ဆီးဂိမ်းကော်မတီ၊ မလေးရှား အာဏာပိုင် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သွားဖို့ရှိတယ်လို့ မလေးရှား နိုင်ငံ မြန်မာ သံရုံးက တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် (၆)ကြိမ်မြောက်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ အရှေ့တောင် အာရှဆီးဂိမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အားကစားသမားတွေ အနေနဲ့ သွားရေးလာရေးမှာ အခက်အခဲဖြစ်ရုံတင်မက စားရေးသောက်ရေးတွေနဲ့ နေရေးထိုင်ရေးတွေမှာ ပါ အဆင်မပြေတာတွေ ရှိနေတာပါ။
ဒါ့အပြင်မြန်မာပွဲစဉ်တွေမှာ လာရောက်အားပေးတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေ ရိုက်နှက်ခံရမှုနဲ့ လုယက်ခံရမှုတွေပါရှိနေတာမို့ လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မလေးရှားအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာသံရုံးက အမြဲတန်းအတွင်းဝန်ဦးသက်ဇော်တိုးကပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ကတော့လေ အခုက စာတွေဘာတွေပို့ထားတယ်ပေါ့နော် ၊ မနက်ဖြန် ကြတော့လည်း ကျနော်တို့ သံရုံး Website ကနေပြီးတော့ ကျနော်တို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို ကျနော်တို့တင်ပါ့မယ်။နောက်ဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေကို ကျနော်တို့ ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံး သူတို့နဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။”
သြဂုတ်လ၂၁ရက်နေ့ညက မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာ-မလေးရှားဘောလုံးပွဲစဉ်အပြီးမှာ လာရောက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ လုယက်ခံရတာတွေ ၊ ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အထဲ ဆိုးဆိုးရွားရွားတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား၂ယောက် ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး မလေးရှားရောက် နှလုံးလှပရဟိတအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးသက်က အခုလိုပြောပါတယ်။
“မစိုးရိမ်ရပါဘူးခင်ဗျ သူတို့ပထမတော့ ခေါင်းမကြည်တာပေါ့ခင်ဗျ။ ထုံဆေး အခြေအနေတွေနဲ့ Operation လုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်လို့ တနေကုန် အားပေးထားတာအတွက်ကြောင့် weak ဖြစ်တာပါ အဲဒီလို ပင်ပန်းတာတွေ ပါလိမ့်မယ်။ အခုတောင်ခေါင်းသိပ်မကြည်သေးဘူးပေါ့ဗျာ ခေါင်းကိုက်နေသေးတယ်။”
မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာပရဟိတအသင်းတွေစုပေါင်းပြီး နောက်လာမယ့် မြန်မာပွဲစဉ်တွေအတွက် ပရိသတ်တွေ အန္တရာယ်ကင်း လုံခြုံစွာ လာရောက်အားပေးနိုင်ဖို့ မလေးရှားဆီးဂိမ်းကော်မတီနဲ့ ညှိနှိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ နှလုံးလှပရဟိတအသင်း ဥက္ကဌက ဦးသက်ကပြောပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကျန်တဲ့ မြန်မာပွဲစဉ်အတွက်တော့ ကျနော်တို့ Volunteer အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ကျနော်တို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် Sea Games တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ကျနော်တို့ တွေ့ပြီးတော့ ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။ ထပ်ပြီးတော့ ဘယ်လိုမြန်မာပရိတ်သတ်တွေကိုလည်း ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်နေရာကိုလာဖို့ ဆော်သြမှုတွေ ၊ ဘယ်လိုနေရာ အနေအထိုင်မျိုး ကိုနေရင် အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းတွေ ကျနော်တို့ဖြန့်ကြက်ပြီးတော့ အတည်ပြုပေး သွားမှာပါ။”
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုကျင်းပနေတဲ့ (၂၉)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှဆီးဂိမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ အားကစားသမားတွေကို စိတ်ဓါတ်မကျဖို့ ဥပဒေအတွင်းက အနိုင်ယူပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မနေ့ကသြဂုတ်လ ၂၂ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ သ၀ဏ်လွှာပေး ဖို့ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခေါက်၂၉ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာ အမျိုးသားဘောာလုံးပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ အားလုံးကလည်း မျှော်လင့်တောင့်တနေကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by (ကောင်းစံဟိန်း)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, August 24, 2017 No comments:
မလေးရောက် မြန်မာတွေ သတိဝီရိယနဲ့ နေဖို့ မြန်မာအစိုးရ သတိပေး နှိုးဆော်
မလေးရှား နိုင်ငံရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ သတိ ဝီရိယနဲ့ လှုပ်ရှား သွားလာ နေထိုင်ကြဖို့ ကွာလာလမ်ပူမြို့ အချေစိုက် မြန်မာ အစိုးရက သတိပေး နှိုးဆော် လိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ရက်စွဲနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူ အခြေစိုက် မြန်မာသံရုံးက အဲ့ဒီလို အသိပေးနှိုးဆော်ထားတာပါ။
ဒါအပြင် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် မလေးရှားအစိုးရ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကိုလည်း အကူအညီတောင်းခံထားတယ်လို့လည်း ပြောကြားထားတာပါ။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှာ ကျင်းပလျက်ရှိနေတဲ့ (၂၉) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့ ညပိုင်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာ-မလေးရှား ဘောလုံးပွဲစဉ်အား လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့ Stadium Shah Alam ဘောလုံးကွင်းအနီးမှာ ရိုက်နှက်၊ လုယက်ခံရတာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာအစိုးရက အဲ့ဒီလို သတိပေးနှိုးဆော်လာ တာဖြစ်ပါတယ်။
From : Myanmar Cable News by Aung Thu
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news
မောတောင်နယ်စပ်တွင် နေရပ်ပြန် မြန်မာ လုပ်သားများထံမှ ငွေကြေး တောင်းခံနေ
ထိုင်း နိုင်ငံ ကနေ ပြန်လည် ဝင်ရောက် လာတဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားတွေကို ဆိုင်ကယ် တက္ကစီ ကယ်ရီ ပြေးဆွဲ သူတွေက လမ်းကြောင်းရှင်း ဆောင် ရွက် ပေးနေကြောင်း ပြောဆိုပြီး လူတဦးကို ဘတ် ၁၀၀၀ ကောက်ခံ နေတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်ရောက် လာတဲ့ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမား တဦးက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ပရာကျွတ်ခရိုင်အတွင်းမှ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ကိုအောင် က “မသိလို့ ပေးလိုက်ရတယ်။ ဆင်းခွန်ဂိတ် တောင်ခြေမှာ မြန်မာဆိုင်ကယ်သမားတွေက တောင်ပေါ် မောတောင်မြို့ကို သွားမယ်ဆိုရင် ဘတ်တထောင်ပေးရမယ်ဆိုလို့ ပေးပြီးလိုက်တာ ဒီရောက်တော့ ဘာမှ မပေးရဘူး ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
ဒီမှာကူညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေတာကို အခုမှသိရတယ်။ နောက်ထပ်ရောက်လာမယ့် မြန်မာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ သူတို့ကိုလည်း ဒီလိုမဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးစေချင်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားတွေက လူတဦးကို ဘတ်တထောင်ယူရာမှာ လ၀ကအတွက်ဘတ် ၂၀၀၊ နယ်စပ်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွက် ဘတ် ၁၀၀၊ စရဖ နဲ့ တခြား အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် ဘတ် ၅၀ စီပေးသွင်းရကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
မောတောင်ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်မောင်မောင်က “မောတောင်နယ်စပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ တရားမဝင် ငွေကြေးကောက်ခံနေတာတွေ မရှိဘဲ၊ နေ့စဉ် လူဝင်လူထွက် စာရင်းတွေကိုလည်း သေချာမှတ်တမ်းပြုလုပ်ကာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
တနင်္သာရီမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်ဟိန်းက “မောတောင်- ဆင်းခွန်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကို ဖြတ်သန်းသွားလာရာမှာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ အားလုံးမှာ ထိုင်းဂိတ်မှာ ဘတ် ၃၀၊ မြန်မာဂိတ်မှာ ကျပ် ၁၀၀၀ တရားဝင်ငွေသွင်းကာ သွားလာလို့ ရပေမယ့်လည်း အခုနေရပ်ပြန် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဘတ် ၁၀၀၀ (မြန်မာငွေကျပ် ၄ သောင်းနီးပါး) ကောက်ခံနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ တရားမဝင်ငွေ ကောက်ခံနေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ လူဝင်လူထွက်စာရင်း ကွာဟနေတာတွေကို နယ်/လုံကို တင်ပြပြောဆိုထားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
မောတောင်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးသားလေးက “မောတောင်ကို နေ့စဉ်လူ ၂၀၀ လောက် ပြန်ဝင်လာနေပါတယ်။ သူတို့ကို နေရာထိုင်ခင်း စားသောက်စရာတွေကို တတ်နိုင်သမျှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ နေရပ်ကိုပြန်ဖို့ အခက်အခဲရှိသူတွေကိုလည်း အလှူရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး ပြန်နိုင်အောင် ကားခလေးတွေ စီစဉ်ပေးနေပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
တနင်္သာရီမြို့နယ် မောတောင်မြို့မှာ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ဝင်ပေါက်တခုဖြစ်ပြီး နေရပ်ပြန် မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေမှာ အဆိုပါနယ်စပ်ပေါက်မှ နေ့စဉ်ရာချီ ဝင်ရောက်နေတယ်လို့ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ မောတောင်မြို့ခံပရဟိတအသင်းဝင်တွေက ပြောကြားပါတယ်။
သတင်း – မြတ်ထွဋ် (မြိတ်)
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/216179
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သား ၆ သောင်းကျော် နေရပ်ပြန်
ထိုင်း နိုင်ငံထဲက သောင်းနဲ့ ချီတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက်ကို ပြန်နေ ကြပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ် အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံသား အလုပ်သမား ခြောက်သောင်း လောက် ပြန်သွားတဲ့ အကြောင်း ထိုင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး တာဝန်ရှိ သူတွေက တနင်္လာနေ့မှာ ပြောပါတယ်။
ထိုင်းစစ်အစိုးရက နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဥပဒေသစ်တရပ်ကို ချမှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အသိုင်းအ၀ိုင်းအကြား စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့မှုတွေဖြစ်လာပြီး အခုလို ပြန်ထွက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ပြန်သွားတဲ့ အရေအတွက်ဟာ ပိုပြီးတိုးလာနေတယ်လို့လည်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်ကြမ်းအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ ဆင်းရဲတဲ့အိမ်နီးချင်း မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကနေလာတဲ့ အလုပ်သမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား အများစုဟာ ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီ ၀င်ငွေရနေတဲ့ ပင်လယ်စာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများစီမံခန့်ခွဲရေး ဥပဒေသစ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့် မှတ်ပုံတင် အထောက်အထားမရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားတွေကို ခန့်ထားတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၂ သောင်း ၃ ထောင်ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၈ သိန်း ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို အလုပ်သမား အလုံးအရင်း ပြန်ထွက်သွားကြတာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်တာကြောင့် ဒီအသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဥပဒေကို ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့ ထိုင်းအစိုးရက ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။
မြန်မာ့သတင်း မီဒီယာ အရေး EU စိုးရိမ်
သတင်းထောက်များ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြ နေကြစဉ်။ (ဇွန် ၈-၂၀၁၇)
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ သတင်းထောက် တွေနဲ့ သတင်း မီဒီယာ သမားတွေ လတ်တလော ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံရတာ၊ တရား စွဲဆိုခံ ရတာတွေ ရှိနေတာနဲ့ ပတ်သက် လို့ စိုးရိမ် မကင်း ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်း ဥရောပ သမဂ္ဂ EUက ဒီကနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လထဲမှာပဲ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ သတင်းထောက် တချို့ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး ခံရတာ ခံခဲ့ရ ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာ နိုင်ငံတွင်း သတင်း မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက စိုးရိမ်မကင်း သဘောထားတွေ ထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ EUရဲ့ ကြေညာချက် ထွက်လာတာပါ။
မခင်ဖြူထွေးက အပြည့်စုံ တင်ပြပေးပါမယ်။
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းမီဒီယာတွေ အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ သတင်းရယူနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ပတ်ဝန်းကျင် တခု ရှိဖို့ အရေးကြီး သလို၊ လတ်တလော သတင်းမီဒီယာသမားတွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာ၊ တရားစွဲဆို ခံရတာတွေ ဆက်ပြီး ရှိနေတာဟာ စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ Valerie Zirl က ပြောပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ သတင်းထောက်တွေ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာ ဒါမှမဟုတ် တရားစွဲဆိုခံရတာတွေဟာ စိုးရိမ် စရာကောင်းလောက်အောင် တိုးလာနေပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ယူဆခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် တွေဟာ လူသားတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ အခြေခံ အခွင့် အရေးဖြစ်သလို၊ ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင် အသိုင်းအ၀ိုင်း အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမှာ အခြေခံတဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွေကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအချက် တခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။”
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လနှောင်းပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ တအောင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ TNLA က ဦးစီးကျင်းပတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်း အနားကို သတင်းယူပြီး ပြန်လာကြတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ DVB နဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနတွေက သတင်းထောက် သုံးဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး မတရား အသင်း ဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မဥပဒေနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရတာရှိသလို၊ တခြားသော ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဒါမှမဟုတ် တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ သတင်းမီဒီယာ သမားတွေ လည်း အများအပြား ရှိနေတာပါ။
ဒါကြောင့် လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ သတင်းမီဒီယာ ပိုပြီး ထိန်းချုပ်ခံလာနေရသလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ထုတ်မှုတွေနဲ့ စိုးရိမ်မကင်း သဘောထားတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းသမားတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သတင်းရယူနိုင်အောင် အစိုးရက လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေအရ အကာအကွယ် ပေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ အီးယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အရေးပါတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အားထုတ် ဖော်ဆောင်နေတာမှာ လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေ ပေးသွားဖို့ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်လို့လည်း ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ ဃ နဲ့ တရားစွဲဆိုထားတဲ့ အမှုပေါင်း ၆၄ မှု ရှိပြီးတော့ သတင်းမီဒီယာသမားတွေ အပေါ် အရေးယူ ထားတဲ့အမှု ၉ မှုအထိရှိပြီး တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သတင်းသမား ၁၄ ဦး ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံး လောလောလတ်လတ် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးတာ ခံခဲ့ရတဲ့ DVB နဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနတွေက သတင်းထောက် သုံးဦးကတော့ လက်ရှိ သီပေါအကျဥ်းထောင်မှာ ချုပ်နှောင် ခံထားရပြီး ပုဒ်မ ၁၇ (၁) မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှု ဥပဒေပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲဆိုထားပြီးတော့ သူတို့ကို ဒီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရုံးတင်စစ်ဆေးမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (မခင်ဖြူထွေး)
နေရပ်ပြန် မြန်မာလုပ်သားတွေဆီက ငွေကြေးကောက်ယူတာ မလုပ်ဖို့ ထိုင်းရဲချုပ် သတိပေး
ထိုင်းနိုင်ငံ ကနေ ပြန်ကြတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ဆီကနေ ငွေကြေး ကောက်ယူခြင်း မလုပ်ဖို့ ထိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င်တွေကို ရဲချုပ်က မနေ့က သတိပေး လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်တဲ့ အလုပ်သမားတွေ ဆီကနေ ငွေတောင်းနေတဲ့ ရဲတွေကို ဗွီဒီယို ရိုက် ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံက ရုပ်သံ သတင်း ဌာန တွေရဲ့ သတင်းတွေကနေတဆင့် ထိုင်းရဲချုပ်က သတိပေးလိုက် တာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့က ကိုရဲမင်း က ပြောပါတယ်။
"အိမ်ပြန်မယ့် တရားမ၀င်အလုပ်သမားတွေကိုရော၊ စာရွက်စာတန်းမပြည့်စုံတဲ့ အလုပ်သမားတွေရော ပြီးတော့ ထိုင်းအလုပ်ရှင်တွေဆီကရော ငွေယူ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ လုပ်တဲ့ ထိုင်းရဲမှန်သမျှကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမယ်။ ဒါမျိုးကြေညာထားတယ်။ အဓိကက အိမ်ပြန်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ငွေညှစ်နေတာတွေကို ကျနော်တုိ့ ဗွီဒီယို တက်ပြီး သိသွားတဲ့နောက် နောက်တစ်ရက်မှာ အဲဒီအမိန့်ကို ပြန်ထုတ်တာပေါ့နော်။ အဲ့အမိန့် ကတော့ တရားဝင်ကို ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်။ ထိုင်းရုပ်သံသတင်းတွေမှာတက်ပြီဆိုရင် အမှန်အကန် ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်၊ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့ ပြောလို့မရဘူး"
တရားမ၀င် အလုပ်သမားတွေကို ဖမ်းဆီးနေတဲ့ စီမံချက်စပြီးနောက်ပိုင်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်အဝေးပြေးကားဂိတ်နားမှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဆီကနေ ထိုင်းရဲ ၃ ယောက်က ငွေတောင်းနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ဟာ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီဗွီဒီယိုမှာ ငွေတောင်းနေတဲ့ ထိုင်းရဲ ၃ ယောက်ကို ရာထူးချပြီး နယ်မြေပြောင်းတဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ အရေးယူထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဥပဒေသစ်ကြောင့် သောင်းနဲ့ချီတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ နယ်စပ်ဂိတ် အသီးသီးကနေ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာနေ ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုပြန်လာရာမှာ နှစ်နိုင်ငံလ၀ကအကြား သဘောတူညီချက်နဲ့ နယ်စပ်ကို အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးတာတွေရှိနေပေမယ့် ပွဲစားတွေကို ငွေကြေးပေးပြီး ပြန်လာ ကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေလည်း ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ DPN အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့စည်း
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC ရဲ့ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး ညှိုနိုင်းရေး အဖွဲ့ DPN ကို အသစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်ပြီး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် UNFC အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ခူးဦးရယ် ကပဲ ဆက်လက် တာဝန်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၃ရက် ဒီနေ့မှာ ပြန်ဖွဲ့ လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး တပ်ဖွဲ့ ၅ ခုထဲက ကိုယ်စားလှယ် တွေကို လိုအပ်သလို အချိုးတူ ဖွဲ့စည်း လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ခူးဦးရယ်က ပြော ပါတယ်။
DPN အဖွဲ့သစ်မှာ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ KNPP ဒုဥက္ကဌ ခူးဦးရယ်၊ ဒု အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် မွန်ပြည်သစ် ပါတီ က နိုင်အောင်မငေး၊ အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ SSPP အဖွဲ့က ဗုိုလ်မှူးကြီး စေအွန်၊ NMSP အဖွဲ့က ဒေါက်တာ နိုင်ရွှေသိန်း၊ ရခိုင် အမျိုးသား ကောင်စီ ANC အဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းထွန်း နဲ့ ဦးထွန်းဇော်၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် ယူနီယံ LDU အဖွဲ့က နာဗစ်ဘို၊ KNPP အဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးကြီး ဘုန်းနိုင် တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဘက် DPN မှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းအလဲ မရှိတဲ့အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိစတွေမှာ တိုးတက်မှုရှိလာနိုင်ပြီး အဖွဲ့က တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက် ၉ချက် အပေါ် ဆက်လက်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး အဖြေရှာကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/40807/
ကုလအဖွဲ့ အ၀င်မခံတဲ့ မြန်မာကို မလေးရှားက အရေးယူဖို့ စီစဉ်
မလေးရှား ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ် Ahmad Zahid Hamidi
ကုလ သမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေး ကောင်စီက စေလွှတ်မယ့် အချက် အလက် ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ကို မြန်မာ နိုင်ငံထဲ ၀င်ခွင့် မပြုဘူးလို့ ပြောဆို လိုက်တဲ့ အပေါ် မလေးရှား အစိုးရက ဒေါသတကြီး တုန့်ပြန် လိုက်ပြီး မြန်မာကို အရေးယူဖို့ စီစဉ် နေတယ်လို့ The Straits Times သတင်းမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
မလေးရှား ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ် Ahmad Zahid Hamidi က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာနည်းလမ်း၊ ဒါမှမဟုတ် သံတမန်ရေး နည်းလမ်း တခုခုနဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားသုံးသပ်နေတယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်တင်က ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကို မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခွင့် ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အတိအလင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမျိုးသား လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်းကလည်း တချို့နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့တာဟာ စေတနာကောင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်တာမျိုး ရှိနိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးအရ တလွဲ အသုံးပြု ထိုးနှက်တာမျိုးတွေ တွေ့ရတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း စွပ်စွဲပြောဆို တာမျိုးတွေ ရှိနေတာကြောင့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းတွေကို တလွဲသုံးပြီး လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ် လိုမှုတွေကို သတိပြုရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျုးမှာ ပြောထားပါတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/local-news/40791/
ကဏ္ဍ နိုင်ငံတကာသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း, မြန်မာရေးရာ
ထိုင်းအလုပ်သမား ဥပဒေသစ် ဆိုင်းငံ့မှု ပြင်ဆင်ချိန်ပိုရဟု မြန်မာ သံအရာရှိ ဆို
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ဘန်ကောက်
ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းက ရွှေ့ပြောင်း အလုပ် သမားများ ဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ် ပြဌာန်းဖို့ ထိုင်း အစိုးရ ဘက်က ဥပဒေ သက်ရောက်ချိန် ရက်ပေါင်း ၁၂၀ တိတိ ဆိုင်းငံ့ လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေသစ်အရ အထူးစီမံချက်အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတဝှမ်း တရားမဝင်အလုပ်သမား ထောင်ချီ ဖမ်းဆီးနေချိန် ထိုင်း အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ရွေ့ပြောင်း အလုပ် သမားတွေ အပေါ် ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် လျော့နည်းအောင် လုပ်ဆောင်တဲ့ အနေနဲ့ အခုလို နောက်ဆုတ် လိုက်တာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း သိန်းချီရှိနေတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးကိစ္စကိုလည်း ထိုင်း-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြား အလေးအနက်ထား ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။
အခုလိုဆိုင်းငံ့လိုက်တဲ့အတွက် အထောက်အထားခိုင်လုံမှုမရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် တရားဝင် အထောက်အထားရအောင် အများကြီးပြင်ဆင်ချိန်ရသွားစေတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး အလုပ်သမားသံအရာရှိကပြောပါတယ်။ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းက မဆုမွန်က အလုပ် သမားသံအရာရှိဦးနိုင်မင်းသူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ အလုပ်သမားတွေအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေ သူက အခုလိုစဖြေပါတယ်။
အလုပ်သမားသံအရာရှိဦးနိုင်မင်းသူ။ ။ သူတို့ကကျတော့ဗျာ ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေကိုပယ်ဖျက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ပြင်ဆင်ချိန် ရအောင် ဆိုတဲ့ သဘော ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ခေတ္တ ဆိုင်းငံ့ပေါ့နော်။ ဆိုင်းငံ့ဆိုတဲ့ သဘောကတော့ အဓိကကတော့ အလုပ်သမားတွေ ငြိနေတဲ့ ကိစ္စကတော့ အလုပ်နေရာ မတူတာတွေ အထောက် အထား မရှိတာတွေ သူဌေး နာမည် မတူတာတွေ ပြင်ဆင်ချိန် ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ပေးလိုက် တယ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ အချိန်မှာ သူတို့ သူဌေးမတူတဲ့ သူတွေ သူဌေး တည့်ပေါ့။ အလုပ်ရှင် မတူသူတွေ အလုပ်ရှင် တည့် ဆိုတဲ့ ဟာမျိုး လုပ်လို့ရမှာပါဗျ။
မဆုမွန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဲ့ဒီ့တော့ ဦးနိုင်မင်းသူတို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးဘက်က အခုလိုမျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန် ရက်အတောအတွင်းမှာပေါ့နော် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် ဘာများ လတ်တလော ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေရှိပါလဲရှင်။
အလုပ်သမားသံအရာရှိဦးနိုင်မင်းသူ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ အခုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆိုတာကလေ အထောက်အထားမဲ့တဲ့သူတွေကတော့ ဘာပဲပြောပြော ပြန်တော့ပြန်ရမှာပေါ့နော်။ အခုဆိုရင် တချို့ဆို သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ ပြန်နေကြပြီ။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ အလုပ်သမားရေးရာအစည်းအဝေး ရန်ကုန်မှာပေါ့နော် လုပ်ပြီးပါပြီ အဲ့ကနေ ဘာတွေ သဘောတူညီချက်တွေ ရသလဲဆိုတာတော့ ကျနော်တို့မသိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီအလုပ်သမားတွေ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အများကြီးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တော့ ကျနော်တို့တော့ ထင်ပါတယ်ဗျ။
မဆုမွန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီ့တော့ အခုလို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဘက်က အချိန်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိမှ ဒီလိုမျိုး အချိန်ပေးလိုက်တဲ့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလဲရှင့်။
အလုပ်သမားသံအရာရှိဦးနိုင်မင်းသူ။ ။ ဒါကတော့ အလုပ်သမားအတွက်ရော အလုပ်ရှင်အတွက်ရော အများကြီးအဆင်ပြေမှုဖြစ်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခုနက အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေ အထောက်အထားလွဲနေတဲ့သူတွေအတွက် ပြင်ဆင်ချိန် ရသွားတာပေါ့နော် ပြင်ဆင်ချိန် ရသွားတဲ့အတွက် အများကြီးအဆင်ပြေမှာပါခင်ဗျ။
မဆုမွန်။ ။ အခုလောလောဆယ် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေအတွက် အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးဘက်က ဘာများကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါလဲရှင်။
အလုပ်သမားသံအရာရှိဦးနိုင်မင်းသူ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ တချို့ဂိတ်တွေမှာ ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကို အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့အတွက် စစ်ဆေးနေတာပေါ့နော်။ စစ်ဆေးနေတဲ့အပိုင်းကို ကျနော်တို့က လှမ်းပြီးတော့ ဒီဟာတွေကို ဖြေလျော့ပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က အလုပ်သမားတွေ အထောက်အထားမပြည့်စုံလို့ ပြန်လုပ်ဖို့ ပြန်ကြတယ်။ အဲ့ဓီ့အပေါ်မှာ ဖြေလျော့ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဖမ်းဆီးတာမျိုး မလုပ်ဖို့နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျနော်တို့ လှမ်းပြီးတော့ ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ် တချို့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့။
မဆုမွန်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ လောလောဆယ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပေါ့နော် မြန်မာသံရုံး အထူးသဖြင့် အလုပ်သမားသံအရာရှိတယောက်အနေနဲ့ ဘာများသတိပေးစကားပြောကြားချင်တာရှိပါသလဲရှင်။
အလုပ်သမားသံအရာရှိဦးနိုင်မင်းသူ။ ။ အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ သူများနိုင်ငံမှာ နေမယ်ဆိုရင်တော့ အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိဖို့လိုမယ်။ ပြီးတော့လည်း အခုဖမ်းတယ်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း အရင်ရက်ပိုင်းတွေက ကျနော်တို့ ကြားနေရတာပေါ့နော် အဲ့လိုကြားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်ပြန် ။ ဒီမှာ အလုပ်ဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ တရားဝင်နည်းလမ်း ရှိပါတယ်။ MOU နဲ့ပေါ့နော် ကုမ္မဏီတေ့နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဒီမှာ တရားဝင် လာလုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာကတော့ အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ အထောက်အထားတွေ ပြန်ပြီးတော့ ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပြီးမှ လာလုပ်ကြဖို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးဘက်က ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အခြေအနေ အလုပ်သမားသံအရာရှိဦးနိုင်မင်းသူကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းက မဆုမွန်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
From : ဗွီအိုအေမြန်မာသတင်းဋ္ဌာန by - (မဆုမွန်)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, July 02, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း, မြန်မာရေးရာ